Ukuphumla okanye ukuhlala kwezemidlalo? Uyagqiba . - I-Airbnb
Ukuphumla okanye ukuhlala kwezemidlalo? Uyagqiba .
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPierrette
Iflethi okanye indlu ekwicomplex endiyinikelayo ikumgangatho osezantsi, ijongene nePyrenees. Igadi egcweleyo, evaleke ngokupheleleyo, engakhange ihoywe, ikuvumela ukuba ufumane isidlo sasemini okanye "laze" elangeni uxolo ngokupheleleyo.
Idibanisa izinto ezinokusetyenziswa esixekweni kunye nokuzola kwasemaphandleni kunye nokuzonwabisa kwaso, ichibi, igalufa... Intaba ekufutshane inikezela ngamathuba okunyuka intaba, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini... kuxhomekeka kwixesha lonyaka. Ilungele uqeqesho lokuqhuba ibhayisekile! Ufumana ubutofotofo ngokukhululekileyo nangeendleko eziphantsi.
Indawo yokuhlala endiyinikelayo yenza kube lula ukuhlala kuyo.
Inamagumbi amabini ohlukeneyo + nekhitshi, enoba :
Igumbi lokulala eliyi-1 elinebhedi yabantu abayi-2 (1.40) elinendawo yokuhlambela,
Igumbi lokuhlala eliyi-1 elinabantu abayi-2 abatofotofo (1.40 - ukulala yonke imihla)
Igumbi lokuhlambela lesibini eliyi-1
ikhitshi, elinento yonke
I-WC Corridor inikezela ngayo yonke into. Ukufikelela ngqo kwigadi evaleke ngokupheleleyo.
I-Terrace kwigadi evaleke ngokupheleleyo, ejongene nePyrenees.
Qaphela : izitepsi zangaphandle zokufikelela kwindawo yokuhlala esesitratweni.
Ukuba ezi meko zezindlu ziyakufanela, ndiza kukuvuyela ukukwamkela.
Indawo yam yokuhlala ikufutshane embindini wedolophu, zonke iivenkile, ubugcisa beemuvi uze uzame, ikhilomitha eziyi-35 kuphela ukusuka eSpeyin, iyure eyi-1 ukusuka eToulouse kunye nesikhululo seenqwelo-moya sayo.
Ichibi kunye nebala lokuqubha, lezempilo, igalufa.
Ukunyuka iintaba ezininzi.
Ilungele uqeqesho lokuqhuba ibhayisekile
Uza kuyivuyela indawo yam xa ubona indawo, indawo ekuyo, ukuzola. Indawo yam ilungele abantu abathandanayo, abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, kunye neentsapho (ezinabantwana). Igadi evaleke ngokupheleleyo ikhuselekile kubantwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Pierrette
Ndiyayazi indlela yokuhlala ndinobulumko, kodwa ndifumaneka kuyo nayiphi na inkcazelo kunye noncedo onokuludinga ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndithetha isiSpanish ngokutyibilikayo. Kwelinye icala, isiNgesi sam siyacaphukisa kakhulu...mhlawumbi ndifanele ndibuyele kuso... Zikhona izinto ezifuna ukuguqulelwa ngexesha elinye!
Ndithetha isiSpanish ngokutyibilika…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montréjeau